Momba anay - Chinatown Grain Machinery Co., Ltd.
Chinatown Grain Machinery Co., Ltd. dia manome milina sy serivisy feno amin'ny famokarana sakafo sy ny indostrian'ny fanodinana varimbazaha, toy ny fikosoham-bary, ny ozinina ary ny fanodinana vary. Hatreto, ny vokatray dia misy fitaovana fampitaovana, fitaovana fanadiovana, fitaovana fikosoham-bary, sns. Fantatry ny mpanjifa maromaro izy ireo na an-trano na any ivelany.
Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fanavaozana ny teknolojia, fanatsarana ny fahaizan'ny mpamokatra sy ny kalitaon'ny milina. Ny orinasa no nitarika ny fampidirana ny milina fanapahana laser laser, ny milina mikitroka CNC, ny lathes CNC ary ny fitaovana fanodinana mandroso hafa.
Nandritra izany fotoana izany dia nividy foibe famolavolana CNC, milina mankaleo CNC, milina lathe CNC, grinder ambony, masinina planina ary fampiasam-bola fanodinana fitaovana mandroso hafa, ary nanampy andalana famokarana famafazana elektrika. Ny kalitaon'ny vokatra dia azo ampanantenaina amin'ireo fanohanan'ny fitaovana azo antoka ireo.
Ny orinasanay dia manamboatra milina fanapahana laser takelaka vy, masinina miondrika cnc, vy welding diôdiôrozy ary welding welding arc Ny vokatray dia tsy vitan'ny hoe manana fampisehoana tsara, fa mora ihany koa ho an'ny fametrahana sy fikojakojana miaraka amin'ny vidiny mirary. Ny vokatra miaraka amin'ny haitao mandroso, ny kalitao azo antoka ary ny fisehoana tsara dia nankasitrahan'ny mpanjifa maro.